Luis Ortiz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Chokwadi chechokwadi
musha Latin America Sporting Hunhu Luis Ortiz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara YeCuba Munhu Mukurumbira Boxer ane zita rekuti “King Kong". Yedu Luis Ortiz Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva kwesimba rake rinotyisa rekurova uye hunyanzvi hwekurwisa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Luis Ortiz's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Luis Ortiz Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Boxer Luis Ortiz akaberekwa pazuva 29th raKurume 1979 kuguta uye manejara eCamaguey muCuba. Iye akazvarwa kune vabereki vane ruzivo vangangowana nzira yavo kune internet mushure mekugadzirwa kwe12G network network.
Rudzi rweCuba rwedzinza rakasanganiswa nemidzi midiki isingazivikanwe akakurira mumhuri yepasi-pekuzvarwa kunzvimbo yaakaberekerwa muCamaguey kwaakakurira pamwe nehama dzake - sevabereki vavo - vanonyara kufambidzana.
Kukura paCamaguey inozivikanwa nekuve hotbed yakaburitsa huwandu hwepamusoro-soro bhokisi, Ortiz aiziva nezvekuratidzira munguva yehudiki uye aive shasha yemukurumbira Muhammad Ali uyo waaiona achirwa kakawanda pane wekare TV neVCR.
Luis Ortiz Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Ortiz aive pakati pemakore ekuyaruka, Muhammad Ali akaonekwa segamba muCuba nekuda kwekumira pachena kurwisa Hondo yeVietnam uye nemaonero ake nezvekusarurana muAmerica.
Nekuda kweizvozvo, kubvunzurudzwa kwake pamwe nekurwa kwaive kwakasununguka kuzunza ma anti-American airwaves eCuba kusvika kune zvinofadza zvevechidiki vakaita saOrtiz avo vaitsvaga kururamisa zvavanofarira mumutambo wetsiva.
Hazvina kutora nguva refu Ortiz apinda mune ane mukurumbira 'La Finca' tsiva chikoro muHavana nechido chechokwadi chekutanga kuvaka basa mumutambo wetsiva.
Panguva yaOrtiz aive pazviri, aive nezvidhori zvidiki saSavon, Stevenson naJuan Hernandez Sierra vaakatevera nekuda kwemaitiro avo akasimba ekurwa, hunhu uye kuzvininipisa.
Luis Ortiz Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Rwendo rwehunyanzvi hwebasa mumutambo wetsiva rinotanga nezvibhakera zveamateur. Fortunate yaOrtiz, akakanda zvibhakera zvakawanda kupfuura zvaakatambira uye akawanikwa akafanirwa kuve ari Bonafide kwenguva yakareba nhengo yeCuba National timu.
Pamusoro wepamusoro pebasa rake reamateur muna2008, Ortiz aive akaunganidza rekodhi inonakidza yekukunda mazana matatu nemakumi matatu nematatu nekukundwa 343 chete.
Pamusoro pezvo, aive nerukudzo rwakawanda kumakadhi ake anosanganisira menduru dzeCubaan Championship, menduru mbiri mumakwikwi epasi rose uye kodzero yekuzvitutumadza yekuve mukota-fainari mumutambo we2005 World Championship wakaitirwa kuChina.
Luis Ortiz Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
2009 raive gore iro Ortiz akaita danho rekutendeuka rekusiya nyika yake yekuCuba kutsvaga basa rinobhadhara muUnited States.
Sarudzo yake zvisinei haina kuburitswa nemakaro asi kudiwa kwekukurumidza kwekuwana nzira dzekupa iye mwanasikana airwara panguva iyoyo - Lismercedes akanyanya kurapwa.
Izvo zvinokwana kucherechedza kuti kutsauka kwaOrtiz kuUnited States kwanga kusiri nyore senge gunguwo rinobhururuka nekuti kusiya chitsuwa cheCuba pasina mvumo kwaionekwa sechiito chekutengesa.
Nekudaro, aive akangwarira zvakanyanya murwendo rwake rwune njodzi kudzamara akazosvika kuMiami kwaakagara nemukadzi wake nevana vatatu.
Luis Ortiz Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Paakagara kuMiami, Ortiz akaonekwa pamwe neanozivikanwa pasi rose Fifth Street Gym - uko Cassius Clay aka Muhammad Ali aigara achidzidzisa - ndokuzviisa pasi pekutungamira kwaDino Spencer.
Pasina basa kuti anyore zvakawanda, Ortiz akagadzira rake reunyanzvi gore rinotevera (Kukadzi 2010) nekugogodza Lamar Davis mumasekondi 78 chete.
Mumwe nemumwe akarova ndokupa kukuvadza kune vakatevera vapikisi mumakore manomwe anotevera kudzamara atambura kukundwa mumaoko e Deontay Wilder muna March 2018.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Ortiz ane rekodhi yebasa ye 34 kurwa, 31 kukunda, 1 kurasikirwa uye 2 hapana kukwikwidza. Anobhadhariswa kutarisana naDeontay Wilder zvakare pa23rd yaNovember 2019 yeWBC heavyweight zita.
Kune zvese zvatinoziva, iyo bout ichave iri yepedyo makwikwi yakapihwa kuti vese vanokwikwidza kufa-vakaoma varwi. Shure kwaizvozvo, iyo yasara ichave nhoroondo.
Luis Ortiz Mudzimai uye Vana:
Sezvo nondo ichitsvaga mvura saizvozvowo naLuis Ortiz anonzwa kudiwa kwekutora rutsigiro kubva kumukadzi wake ane rudo - Lisdey uyo anga agara aine mutambi wetsiva pamberi penzira yake yekuenda mukurumbira nyaya uye akamuona kusvika mukubudirira kwake muUnited States.
Kunyangwe zvishoma zvichizivikanwa nezve hupenyu hwerudo hwaOrtiz uye vasikana pamberi paLisdey, vapedza anopfuura makore gumi sevakaroora uye vane vana vatatu pamwe chete - mwanasikana Lismercedes uye vaviri vadiki vanozivikanwa mwanakomana mudiki nemwanasikana.
Luis Ortiz Hupenyu hwemhuri:
Achienderera kumberi kumhuri yemhuri yaLuis Ortiz, iye anobva kubva kumhuri yepasi-yemhuri kumashure ine zvishoma inozivikanwa mhuri mavambo. Isu tinodonongodza chokwadi nezve nhengo dzemhuri yake kutanga nevabereki vake.
Nezve baba naamai vaLuis Ortiz:
Ortiz akarererwa nevabereki vachiri kuzivikanwa nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka. Kutanga, mutambi wetsiva anochengetedza zvakanyanya nezve nyaya dzine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika zvekuti haawanzo kukurukura nezvemhuri panguva yekubvunzurudzwa.
Kupfupisa zvese izvi, Ortiz ane hurombo pasocial media pamberi izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kubata hove ruzivo nezvevabereki vake nevadikani.
About vanin'ina vaLuis Ortiz uye hama:
Mhuri diki inozivikanwa yaOrtiz inotambanukira kune vanin'ina vake sezvo pasina marekodhi nezvevanin'ina vake nehanzvadzi, kana sekuru vake nasekuru nasekuru nasekuru nasekuru vake vasina kuzivikanwa panguva yekunyora. Saizvozvowo, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini pamwe nababamunini havana kunyanya kuzivikanwa.
Luis Ortiz Hupenyu hwepamoyo:
Vazhinji vateveri asi vashoma vanoziva nezve "King Kong's" hunhu hunopfuura miganho yetsiva mhete. Kana iwe ukawira mukati me "vashoma" chikamu saka pano ndiyo nzvimbo yakanakisa kuve apo isu patinofumura chokwadi nezve ake persona.
Kutanga naOrtiz's Persona inoratidza hunhu hwechiratidzo chake cheAries zodiac. Iye anozvininipisa, anozvishingisa, ane simba, anorayira rukudzo uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Zvaanofarira uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuona mabhaisikopo, kudzidziswa uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Luis Ortiz Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Luis Ortiz ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora makumi maviri emadhora panguva yekunyora? Hupfumi hwetsiva hwaramba hunowedzera vane masosi avo akasimbiswa mumihoro yake kubva mukukunda kurwa uye zvibodzwa.
Zvisinei, anorarama hupenyu hwekuchengetedza hunoita kuti zviome kuteedzera mashandisiro ake emashandisirwo.
Nekuda kweizvozvo zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pedzimba dzaanadzo uye nezvaanogara nemhuri yake kuMiami. Zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvemota dzaanoshandisa kufamba mumigwagwa yeguta rake rekugara.
Luis Ortiz Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Luis Ortiz yehucheche nyaya uye biography isu tinopa zvishoma zvishoma kana zvishoma zvinozivikanwa chokwadi pamusoro pe boxer nechinangwa chekukubatsira iwe kuti utore mufananidzo wake.
Luis Ortiz haana kukura pachinamato sekusimudzirwa nenyaya yekuti haawanzoenda chinamato panguva yekubvunzurudzwa. Kana kuti iye haana kubatwa pakamera pamanamatiro. Zvisinei, hazvigone kusimbiswa kuti mutendi here kana kuti kwete.
Ortiz ndeyechikoro chekare chekare chevabati vetsiva vakaita saMuhammad Ali uyo asina kusimudzira maTatoo mushure mekunge vasimuka kuita mukurumbira.
Kuna Ortiz, kureba kwake kunotyisa kwe6 ft 3 inches iyo yakasangana nemuviri mukuru kuvaka inokwana kukurudzira kutya uye kumuremekedza mumitambo yetsiva.
Kwete nekutenda kuhupenyu hwaLuis Ortiz hwekuchengetedza, hazvigone kutaurwa zvakajeka kuti anosvuta here kana kunwa. Kune zvese zvatinoziva, anotarisira hutano hwake uye haazouisa panjodzi nekunyanyisa mutsika.
Thanks for reading vedu Luis Ortiz Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!